Iforum yeHlabathi ye-Geospatial Forum-2019 - Geofumadas
IQonga leHlabathi leGeospatial-2019
Matshi, 2019 Geospatial - GIS, ezintsha
Ngaba ukhangele ubuchwepheshe bokugxila, iimveliso ezintsha kunye nezisombululo zokongeza ixabiso kwiprojekthi yakho okanye ukuphucula ukusebenza kwakho kwansuku zonke? Intuthuko yakutshanje kwi-geospatial shishino, evela kulo lonke ihlabathi, iya kuboniswa kwi KwiHlabathi yeGeospatial Forum I-2019, eya kwenzeka ngo-Epreli 2 ukuya ku-4, 2019 eTaets Art & Event Park, eAmsterdam.
Yibani kubonisi bethu:
Unomdla ekuboniseni? Kukho ezimbalwa kuphela ezikhoyo! Leli thuba lakho lokuzibandakanya nabaphulaphuli abacebileyo, misela isikhundla sakho njengenkokheli kwinqaku-mali kwaye ufikelele kwizinto ezilungileyo. Akunakutsholwa ukuba abenzi bezakhelo ezibalulekileyo bavakashele umboniso wethu. Yenza okungakumbi!
BHALISA NJENGOBA UKUSEBENZA
Post edlulileyo«Ngaphambilini Indlela yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth - iGoogle Maps - iBing - i-ArcGIS Imagery kunye neminye imithombo
Post Next I-Digital Water Works, Inc. ifumana utyalo-mali olusisiseko kwi-Bentley SystemsOkulandelayo »
Impendulo enye kwi "Iqonga leHlabathi leGospathial - 2019"
Sawubona, emini ntambama evela eSpain.
Ndiza kukhangela yonke into engenzeka kwaye ixelelwe kwi-intanethi malunga nomcimbi.